Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • Index page
Last post by acmv
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကမ္ဘာမြေထိန်းသိမ်းရေး
Green Energy & Renewable Energy၊ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်များ
စွမ်းအင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အကြောင်းများ။ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေစေမည့် စွမ်းအင်များ။
Renewable Energy၊ Green Energy
နေရောင်ခြည်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုပ်လုပ်မှု ဆိုလာပါဝါ။ လေအားလျှပ်စစ်။ Geothermal စွမ်းအင်။ ဇိဝစွမ်းအင်များ။ ထုပ်လုပ်သုံးစွဲပုံများ နှင့် ထုပ်လုပ်မှုနည်းပညာများ
Subforums: Solar Power- ဆိုလာပါဝါ သို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, Wind Power - လေအားလျှပ်စစ်, ရေအားလျှပ်စစ်- Hydro Power, အနုမြူစွမ်းအင်- Nuclear Power
အစိမ်းရောင်နည်းပညာများ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အစဉ်စိမ်းလန်းနေစေမည့် နည်းပညာများ၊ Green Technology
အစိမ်းရောင်နည်းပညာများ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အစဉ်စိမ်းလန်းနေစေမည့် နည်းပညာများ၊
Green Technology Sustainable Technologies
မြန်မာနိုင်ငံ နှင်သက်ဆိုင်သော အစိမ်းရောင်နည်းပညာများ။ အစိမ်းရောင် အဆောက်အဦးများ (Green Buildings)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကမ္ဘာမြေထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေး အစီအစဉ်များ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကမ္ဘာမြေထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေး အကြောင်းအရာများ။ ဆောင်းပါးများ။ လှုံဆော်ရေးအစီအစဉ်များ
Education and Awareness of Environmental Issue, Global warming, CO2 Emission, etc..
Sat Sep 27, 2014 9:01 pm
Green Building-သဘာဝနှင့်နီးစပ်သည့် အဆောက်အအုံများ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကမ္ဘာမြေထိန်းသိမ်းရေး Site များ
သစ်ပင်များသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့ (CO2)ကို စုပ်ယူပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
သစ်ပင်များသည် ကမ္ဘာကြီး၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
သစ်ပင်များသည် ရာသီဥတုထိန်းပေးသည်။ မြေဆီလွှာကို ပိုမိုကောင်းစေသည်။
Subforums: သစ်တောပြုန်းမှုများ, သစ်မွေးစိုက်ပျိုးခြင်း
ဘေးအန္တရာယ်များအကြောင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရဲ့ သဘောကို နားလည်အောင် ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာများ။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကိုသိရှိခဲသော် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပုံ နှင့် ကယ်ဆယ်ရေလုပ်ငန်းများ
Subforums: ရေဘေး, မီးဘေး, မြေငလျှင်ဘေး, လေဘေး, မြစ်၊ချောင်း၊အင်းအိုင် တိမ်ကောမှုများ, လေထုညစ်ညမ်းမှုများ
နည်းပညာနှင့်အသိပညာ စာအုပ်တွေအကြောင်း-eBooks အင်ဂျင်နီယာရင်းစာအုပ်များ၊ Handbooks စာအုပ်များ။ Code များ။ Reference Book များ။ ASHRAE စာအုပ်များ။ Text Book များ။ အသုံးများသည့် ကက်တလောက်များ။
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်များ။ အင်ဂျင်နီယာရင်း ကျောင်းသားများအတွက် Ref Books။
အလွန်ဈေးကြီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသော အင်ဂျင်နီယာရင်းစာအုပ်များအား စုစောင်းထားပါသည်။ မူပိုင်ခွင်ပြဿနာကြောင့် http://www.acmv.org ၏ ဒိုမိန်းနာမည်အောက်မှ တင်မထားနိုင်ပါသဖြင့် File Share Siteများမှတဆင့် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူနိုင်ကြပါပြီ။
ဗဟုသုတ about Air Conditioning and Mechanical Ventilation.
ACMV and AutoCAD သင်တန်းများ
Euno က ဖားအောက်ကျောင်း နှင့် Peninsual မှာ FREE ACMV and AutoCAD သင်တန်းများစနေပါပြီ။
Building Automation and PLC
Building Automation and Programmable Logic Controller ( PLC) အကြောင်းများ၊ Direct Digital Controller (DDC) အကြောင်းများ။ Sensor နှင် Traducer အကြာင်းများ။ Control Loop အကြောင်းများ။ PID tuning အကြောင်းများ။ HMI အကြောင်းများ။ Hi Level interfacing အကြောင်းများ စသည်တို့ကို ...
ACMV and AutoCAD မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
ကျောင်းထပ်တက်မယ် ဆိုရင် ပိုလီတက်(Polytech), အိုင်တီအီး (ITE), BCA, NUS, NTU တက်မယ်ဆိုရင်
အလုပ်အကိုင်အကြောင်း နှင့် Job opportunity
ပြင်ပ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း၊ Job opportunity။ စင်ကာပူ၊ ဘရူနိုင်း၊ ဒူဘိုင်းနှင့် အော်ဇီအထိပေါ့။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ။ပြင်ပ အလုပ်အကိုင် ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်မှုများ။ မိမိသွားလုပ်ရမည်းလုပ်ငန်းခွင် နှင့် လုပ်ရန်တာဝန်များ စသည်တို့ကို စုဆောင်းထားပါသည်။
ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များ အတွက်လည်း ဒေတာအချက်အလက်ပေါင်းများစွာ ကို အပတ်တိုင်း update လုပ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - about Business
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသတင်းများ News about Technology, High Tech, Advanced Tech
လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများ အသိပညာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရန် နှင့် အထွေထွေဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်စုဆောင်းထားသော ဖတ်စရာ၊မှတ်စရာနှင့်ကူးယူစရာများ
မည်သူမဆို မိမိပြောဆိုသည် စကားလုံးများသည် ထိုသူ၏ ယုံကြည်ယူဆချက်များ၊ လုပ်ဆောင်မှုများ ၊ လုပ်ငန်ကျွမ်းကျင်မှု။ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အသိဥာဏ်ကြွယ်ဝမှုနှင့် အမြော်အမြင်ရှိမှုတို့ကိုဖော်ပြသည်။
Sat Nov 01, 2014 9:00 am